Ime ụlọ ime ụlọ ụlọ - Ụlọ ọrụ imepụta ụlọ - Onye mmebe na-emepụta ememe Galati pret - Nobili Ime ụlọ, ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa, ụlọ ahịa
Imepụta imewe ime ụlọ - Imepụta imewe Galati
Anyị ihe otu si Galati Design Noble malitere itinye aka na ohere atụmatụ na ime imewe echiche 3d maka ụlọ, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, Ogwe, hotels, ụlọ ahịa, ọfịs kemgbe 2008. Maka anyị, ọ bụghị naanị ọrụ, kama ọ bụ akụkụ dị mkpa nke ndụ. Ahụmahụ anyị na ọrụ dị elu dị elu enyerela anyị aka ịghọ otu n'ime ụlọ ọrụ mmepụta ihe kachasị mkpa ma dị mkpa. Ka ọ dị ugbu a, anyị enwewo ihe ịga nke ọma ịmepụta ọnụ ọgụgụ dị ukwuu maka ime ụlọ maka ebe obibi na azụmahịa. Anyi emeela oru 3D maka ulo ndi ozo, ndi mmadu, ebe ndi ozo, ebe ndi ozo, ulo nri, Ogwe, pizzerias, ebe ndi mara mma na otutu ihe. Tụkwasị na nke a, anyị nwere ike ịhazi ndozi ụlọ ọrụ nke ndị ọrụ na-enwe ahụ iru ala.
Enweghị isiokwu na ụdị a. Ọ bụrụ na enwere ngalaba ndị dị na ibe a, ha nwere ike ịnwe isiokwu.